Enwere nsogbu na njikọ TestFlight na macOS? Mee nke a | Esi m na mac
Manuel Alonso | | ọtụtụ
N'izu a, Apple wepụtara TestFlight nke na -enye ndị mmepe ohere ịnye ndị ọrụ na mpụga App Store ụdị beta ha. Ụfọdụ ndị ọrụ ekwuola na ha nwere nsogbu na njikọ nke ngwa a na macOS. Yabụ ọ bụrụ na nke a bụ okwu gị, anyị na -atụ aro ụfọdụ ngwọta Ọ dị ka ọtụtụ n'ime ndị ihe metụtara na -arụ ọrụ.
Apple wepụtara TestFlight n'oge na -adịbeghị anya. Ruo taa, ọ ka nọ na ngalaba beta na ọ bụ ya mere ọ na -ejighị bụrụ na enwere ọdịda ụfọdụ. Otu n'ime ihe a na -ahụkarị dịka ọtụtụ ndị ọrụ si dị bụ nke enweghị ike imepe njikọ site na macOS. N'ụzọ dị otú a inwe ike ịrụ ọrụ na ngwa ahụ na -abaghị uru. Otu ndị ọrụ ahụ na ndị mmepe ahụ anọwo na -eme nyocha wee wepụta ụfọdụ usoro na -arụ ọrụ, opekata mpe ugbu a.
N'iburu n'uche na dịka anyị kwuru, ọ bụ mmemme na usoro beta, ihe na -arụ ọrụ taa nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ echi, mana ugbua ọ dị mma na anyị nwere azịza ndị a n'aka.
Mgbe ụfọdụ ngwa TestFlight anaghị emepe mgbe ha pịrị njikọ na akwụkwọ ịkpọ oku TestFlight, yabụ na ha enweghị ike ibudata ma wụnye ngwa beta. Njikọ zuru ụwa ọnụ, nke bụ ọrụ maka ibugharị ndị ọrụ na ngwa ụfọdụ, ka anaghị arụ ọrụ nke ọma maka TestFlight, yabụ, ịpị njikọ ahụ anaghị emepụta ihe a tụrụ anya ya.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike imepe njikọ TestFlight ọha na macOS Monterey, ị nwere ike nye iwu-dọrọ URL ahụ na ogwe adreesị Safari wee tụba ya na akara TestFlight dị n'ọdụ ụgbọ mmiri (ọ dị ka njikọta Universal na-agbasa nwayọ ugbu a) Daalụ @IGIHE maka n'ọnụ!
Jide igodo iwu wee dọrọ URL ahụ site na ogwe adreesị Safari gaa na akara ngosi TestFlight na Dock. Nke a kwesịrị ime ka ngwa ahụ mata njikọ ịkpọ oku.
Detuo njikọ ịkpọ oku na TestFligh. Tapawa njikọ ahụ n'ime ogwe adreesị Safari. Dochie "https" na "itms-beta" pịa Tinye
Ruo mgbe anyị chere maka azịza Apple, ndị a ga -aba uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Enwere nsogbu na njikọ TestFlight na macOS? mee nke a
N'azụ ihe nkiri nke oge nke abụọ nke Lee